Zviwanikwa maringe neKugadzirirwa | Martech Zone
Ini zvakaitika kune vhidhiyo ye Tony Robbins at NATED izvo zvaikurudzira kwazvo. Mumwe wemitsetse yake wakanyatsoita chokwadi neni pachangu:
Rimwe rebasa rinogutsa kwazvo randati ndambove naro raive reInternational Consultant ye ExactTarget. Panguva iyoyo, ExactTarget yaive neyakaganhurirwa application programming interface (API) asi vedu vatengi vaikura mukushambadzira uye otomatiki. Mazuva ese kwaive kusangana nemutengi aive nedambudziko rakaomarara, uye basa rangu kwaive kugadzirisa dambudziko ndichishandisa API yakapusa.
Zvakawanda zvekubudirira kwangu panguva iyoyo ndezvekuti ini nguva dzose ndakafunga nzira yekuzadzisa chinangwa chekupedzisira. Kana iyo API haina kutsigira imwe nzira, ini ndaizoshandisa musanganiswa wedata uye mafoni kuti ndikunde iyo. Dzimwe nguva mhinduro dzaive dzakanaka hunyanzvi (uye dzakatora kuvimba kwehuropi kugadzirisa). Isu taityaira vamwe vevashandi vekugadzira nzungu nekuti mhinduro dzedu dzaizoita mamirioni e API inodaidzira kuita basa.
Chinokosha pakubudirira kwangu kuramba kuri kuti ndaiwanzoti 'kwete', kana zviripo. Dzimwe nguva iwe unofanirwa kugadzirisa nzira kuti usvike kwairi kuenda. Nzira inzira yekushandisa. Kana isipo, iwe unofanirwa kuve nehunyanzvi uye kuvaka yako!
Pasina Resources chikonzero chekusaita kuti zvinhu zviitwe. Kugadzirisa zvinhu iko kugona kutsvaga nzira yekuita kuti chimwe chinhu chiitwe, zvisinei nezviwanikwa!
Heino yakazara Tony Robbins mharidzo paTED. Yambiro: Iye anoshandisa zvimwe zvine mavara kwazvo.
Thanks kune Angela Maiers yeiyo tsvaga!
Tags: Kisimusiemail kushambadzira roinhoroondo yekutengesa kugoneswamutsalattimainjini enjinitekinoroji yekutengesa
Mushure mekuverenga iyi positi, uye nekuteerera kumatepi eRobbins, ndakatarisa zvisungo zvangu zvemakore matsva, ndikabvarura ndikanyora chisungo chitsva: "Itai kuti zviitwe". Cherechedza handina kuti: “Ingozviita”.
Pandakanga ndiri mutengesi uye ndakahaya maneja ekutengesa ndaigara ndichivaudza kuti basa ravo raive rekuti itengeswe kwete kuitengesa. Musiyano uri kushandisa zvese zviripo kuvhara kutengesa uye kana zviwanikwa zvisipo kuzvigadzira kana kuve nehungwaru sezvaunotaura.
Ichi chinyorwa chikuru chekutanga gore.
Jan 3, 2009 na1:46 PM
Ndeipi nzira yakanakisa yepamusoro yekuti timu yako inzwisise & kupindura kune iyi kukurudzira?
Chii chandingaita kuti ndidzidzise izvi zvinobudirira?
Jan 3, 2009 na2:52 PM
Zvinotanga nehutungamiriri, Derek. Vatungamiriri vakuru vanobvisa zvikonzero. Zvakanaka kuti 'kwete', asi hazvifanirwe kuve zvakanaka kuti 'hatigone nekuti…'. Kana bhizinesi richiziva kuti rinofanira kunge richiita chimwe chinhu, vanofanirwa kuve nehungwaru mukuona kuti sei.
Jan 2, 2009 na2:11 PM
Ndatenda nekugovera iyi - inokurudzira uye inobatsira.
Jan 2, 2009 na4:40 PM
Ingoita kuti zviitwe sekutaura kunoita SMB. Chimwe chinhu chakanyanya kuoma chandakakunda muhupenyu kwaive kunzwisisa kuti pekutanga pandinoita chimwe chinhu hachizove chakakwana asi kuti kuedza kwega kwega kwandinoita kuti chimwe chinhu chiitwe ndiko kunosvika pakukwana.